Death Proof(2007) | MM Movie Store
သူမြား ရုပျရှငျရိုကျကှငျးတှမှော စတနျ့ဝငျလုပျပေးရတဲ့ ဘဲကွီးတဈပှေ။ ဒီဘဲကွီးကဆျော ငယျငယျလေးတှဆေို စိတျဝငျစားတယျ။ ဆျောလေးတှေ တှပွေီ့ဆို အူကွောငျကွောငျနဲ့ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ အကွညျ့မြိုးနဲ့ ကွညျ့နတေတျတယျ။
တဈနတေ့ော့ အရကျဘားတဈခုမှာ ကဲခငျြတိုငျးကဲ ဖွဈခငျြတိုငျး ဖွဈနတေဲ့ ဆျောတဈအုပျကိုတှတေ့ယျ။ အဲ့ဒီ ဆျောတဈအုပျ ဘားကနေ အပွငျကို ကားမောငျးထှကျသှားခြိနျမှာတော့ စတနျ့ဘဲကွီးကလညျး သူ့ရဲ့ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ စီးတျောယဉျ ကားကွီး စီးလို့ ကောငျမလေးတှေ နောကျ လိုကျသှားတယျ။
သူ့ စီးတျော ကားကွီးက Death Proof ပါတဲ့။ ဆိုလိုရငျးကတော့ ကားတိုကျမှု ဖွဈရငျ မသတေတျဘူးပေါ့လေ။ နာရီတှမှော water proof ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါရငျ နာရီ ရထေဲကသြှားလညျး မပကျြစီးသှားသလိုပေါ့။သူ့ကားကို သူက Death Proof ဖွဈအောငျ ရှိုငျးထားတယျ။ကောငျမလေးတှကေို သူ ဘာလုပျမှာလဲ? ဒီဘဲကွီးက ဘယျလိုကောငျကွီးလဲ?
သူများ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေမှာ စတန့်ဝင်လုပ်ပေးရတဲ့ ဘဲကြီးတစ်ပွေ။ ဒီဘဲကြီးကဆော် ငယ်ငယ်လေးတွေဆို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဆော်လေးတွေ တွေ့ပြီဆို အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ ကြည့်နေတတ်တယ်။
တစ်နေ့တော့ အရက်ဘားတစ်ခုမှာ ကဲချင်တိုင်းကဲ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ဆော်တစ်အုပ်ကိုတွေ့တယ်။ အဲ့ဒီ ဆော်တစ်အုပ် ဘားကနေ အပြင်ကို ကားမောင်းထွက်သွားချိန်မှာတော့ စတန့်ဘဲကြီးကလည်း သူ့ရဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စီးတော်ယဉ် ကားကြီး စီးလို့ ကောင်မလေးတွေ နောက် လိုက်သွားတယ်။
သူ့ စီးတော် ကားကြီးက Death Proof ပါတဲ့။ ဆိုလိုရင်းကတော့ ကားတိုက်မှု ဖြစ်ရင် မသေတတ်ဘူးပေါ့လေ။ နာရီတွေမှာ water proof ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါရင် နာရီ ရေထဲကျသွားလည်း မပျက်စီးသွားသလိုပေါ့။သူ့ကားကို သူက Death Proof ဖြစ်အောင် ရွိုင်းထားတယ်။ကောင်မလေးတွေကို သူ ဘာလုပ်မှာလဲ? ဒီဘဲကြီးက ဘယ်လိုကောင်ကြီးလဲ?